Wakhti - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan "Wakhtiga". Maqaalo kale oo la xidhiidha noocyada kala duwan ee wakhtiga ka fiiri Wakhti isticmaal kale.
Wakhti (Ingiriis: Time; carabi: زمن) waa cabirka iyo xisaabinta mudada u dhaxeysa laba goor kala duwan midaasi oo ka soo bilaabanta wax la soo dhaafay, imika (hada), iyo goor soo socota oon weli la gaadhin. Sidoo kale wakhtigu waa tirinta isbedelka saacada, habeenka iyo maalinta; maalmaha todobaadka, billaha, sanadka, qarniga iyo wixii ka badan intaas.
Wakhtigu wuxuu wax badan ahaa qodob ka mid ah diimaha, sayniska, taariikhda iyo filoosafi taasi oo si kala duwan loogu xusay dhamaantood.
In kastoo qodobka ah "wakhti" uu ku fadhiyo micno aad u weyn oo saameyn ku leh qodobo badan oo kala duwan, waxaa wakhtiga inta ugu badan loo isticmaalaa qiyaasta, la socoshada iyo xisaabinta in mudo ah oo noqon karta wax la soo dhaafay, mid hada la joogo ama mid soo socda. Waxaa wakhtigu leeyahay halbeegyo lagu xisaabiyo oo lagula socdo, kuwaasi oo loo isticmalo siyaabo kala duwan. Halbeegyada wakhtiga lagu cabiro waxaa ka mid ah saacada (Ilbiriqsi, Daqiiqad), maalinta iyo habeenka, Todobaadka, bisha, sanadka, qarniga iyo wixii la halmaala ee intaas ka badan.
Intaas waxaa dheer, wakhtiga waxaa lagu xisaabiyaa dhamaan ficilada iyo dhacdooyinka Sayniska. Tusaale ahaa, cilmiga Fisikiska marka la baarayo xawaaraha sheey ku socdo waxaa muhiim u ah wakhtiga. Sidoo kale, cilmga Filoosofiga ah waxaa rukun weyn u ah wakhtiga ayadoo loo cuskanayo marka laga soo bilaabo horaantii iyo dhismihii ugu horeeyey ee Koonka.
Diimuha dhamaantood waxay in badan ka waramaan wakhtiga; ayadoo laga soo bilaabo horaantii wakhtiga, wakhtiyada soo socda sida aakhiro, qiyaamaha iwm. Cilmi Fallagu wuxuu in badan ka waramaa socdaalka meereyaasha Koonka iyo wakhtiga, sidii uu ku bilaabmey dhamaan koonku ayadoo la tixraacayo wakhtiga, sidoo kale waxay isticmaalaan halbeeg ku salaysan wakhtiga. Sidoo kale waxaa jirta firkad wakhtiyadan dambe aad u caan ah, Safarka Wakhtiga oo ah in qof ama shey loo safriyo wakhti ka duwan midka uu ku jirey ayadoo wakhtiga dib loo celinayo ama horey loo aadayo. Waa fikrad ku saleeysan in, tusaale ahaan, qof ku noqdo wakhti ka horeeyay midka uu hada ku jiro ama u safri karo mustaqbalka. Ilaa hada ma jirto cid ay u suurto gashay in ay wakhtiga ku dhex safarto oo tegto wakhti kale.
Xisaabinta wakhtiga waxaa ka mid ah saacadaha taas oo loo isticmaalo si loola socdo kolba wakhtiga lagu jiro. taas oo ah lixdan (60) ilbiriqsi.
Qeeybo badan ayaa loo kala saaraa wakhtiga taas oo ku xidhan hadba meesha la joogo. Dunidan aan ku nool nahay waxaa la isku raacay qeeybahan hoos ku qoran:
Ilbiriqsi oo ah midka ugu yar.
Daqiiqad oo u dhiganta lixdan (60) ilbiriqsi,
Saacad waxay la mid tahay lixdan (60) daqiiqad,
24 saac oo ah habeen iyo maalin.
Todobaad sidoo kale loo yaqaan Usbuuc waa todoba maalin.
Bil waa sodon (30) maalmood.
Sanad oo ah marka dhulku hal mar ku soo wareegto qoraxda. Sanad waa 365.4 maalmood.
Qarni waa boqol (100) sanno oo wakhtiga dunidan aan ku nool nahay ah.
Waxaa qoray Hussein omar
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wakhti&oldid=220139"
Last edited on 17 Oktoobar 2021, at 21:18
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:18.